Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्न सुहाउँदैन : मन्त्री बाँस्कोटा – Emountain TV
काठमाडौं, ६ असार । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रि गोकुल बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्न नसुहाउने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले वर्तमान सरकारको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा पहिला आफ्नो इतिहास सम्झन कांग्रेसलाई आग्रह गर्नुभयो । कुनै समय कम्युनिष्ट पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाएको कांग्रेसले अहिले सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्यो भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “स्वतन्त्रताको मसिया धेरै बन्नु पर्दैन । मैले बारम्बार भन्ने गर्या छु । कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेले पनि यो कुरा उठाउनु आवश्यक छैन । १५ सालमा विपि कोइरालाको दुई तिहाईको सरकार हुँदा मणिराज उपाध्यायाको पत्रिकालाई आलोचना गरे वापत लोककल्याणकारी विज्ञापन दिईएको थिएन । मैले भनेको होइन । भीष्म बहादुर देवकोटाले लेखेको हो ।” अरु मुद्धा नभएपछि मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई “परालको त्यान्त्रो समातेर पार लाग्न सक्छ कि” भन्ने दृष्टिले प्रयोग गरिएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै कुरै छैन । यो चाही अरु मुद्धा सकिएपछि परालको त्यान्द्रो समातेर पार लागिन्छ कि भनेर नभन्ठान्नु । हुँदै नभएका कुरालाई उठाएर हैरान बनाउने, डिमोरलाईज्ड गर्ने हिसाबले कुरा उठाउनु, अर्काको राजनीतिक दृष्टिकोणमाथि बारम्बार प्रहार गर्नु राम्रो होइन । यो सत्य हो नेपालमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस छन् । अहिले दुई तिहाईकै सरकार छ । र यो व्यवहारमा जाँचिने छ । को लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको पक्षधर ? को कुरा मात्रै गर्ने भन्ने कुरा ।” उहाँले १५ साल देखिका प्रसंग उल्लेख गर्दै कांग्रेसलाई आफ्नो विगत सम्झन सचेत गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “२०५८ सालपछि मिडिया जगतमा के भएको थियो ? अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपाललाई के भनेका थिए ? पत्रकारका लागि सबै भन्दा ठूलो कारागार भनेर भनेका थिए । कसको पालो थियो ? लोकतन्त्र कल्ले किस्तिमा राखेर बुझाएको थियो ? प्रेस स्वतन्त्रताको शिकारीहरुको सुचीमा को परेको थियो ? मैले लगाएको आरोप होइन ? आई एफजे ले लगाएको कुरा हो ।”
उहाँले पानी धमिल्याएर माछा मार्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले ल्याएका विधेयकका बारेमा नभएका कुरा प्रचार गर्ने काम भएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “मलाई थाहा छैन । हामीलाई त कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रताका शिकारीहरु भनेर उपमा दिएको छैन । र हामीले त्यो भोग्न पनि नपरोस् । हामी त्यसतर्फ सचेत छाैं । सरकारले विधेयकै ल्याउन नहुने थियो भने यसभन्दा अगाडि के ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो ? के गरि सरकार चलाउने गर्नुहुन्थ्यो ? कानुन विना ? नियम विना ? विधिको शासन हो कि के हो ?”
उहाँले गुठीयारहरुलाई आफुले सामन्तवाद नभनेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जनतालाई सामन्ती भनेको होइन । पूँजीवाद पनि छ साम्राज्यवाद पनि छ । सामन्ती सोचहरु पनि छन् । यो चाँही साँचो हो । ”
प्रेस माथि बाह्य र प्रेस आफैले श्रृजना गरेका चुनौति रहेको भन्दै उहाँले प्रेस माथि सरकार वा कहीँ कतैबाट पनि खतरा नरहेको बताउनुभयो । सरकारको तर्फबाट समाचार लेखे बापत कसैलाई पनि केही पनि नगरिएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने काम नभएको र आग्रह छाडि सकारात्मक सुझावको सम्बोधन हुने बताउनुभयो । उहाँले लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा कसैलाई विभेद नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । मिडियाका लागि डाटा सेन्टरका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा उहाँले मिडिया आफैले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “मिडियाका लागि डाटा सेन्टर बनाउनका लागि सरकारसंग बजेट छैन । मिडियाहरु आफैले बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको छ । आफ्नो डाटा सेन्टर आफै बनाउनुपर्छ । किनभने सबै मिडिया उद्योग हो र मिडिया स्वतन्त्र पनि छ । आफ्नै ढंगले इन्भेस्ट गरेर पनि गएको छ सबै ठाउँमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको हिसाबले त्यसमा बजेट रहेको छैन ।”
उहाँले फोर जी सेवामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आफुलाई थाहा नभएको र ३३ महिनामा सक्ने भनिएकोमा १२ महिनामा सक्ने गरि सम्झौता भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कात्तिक सम्ममा देशका ठुला शहरमा र एक बर्ष भित्र देशभरि नै फोर जी सेवा संचालन हुने बताउनुभयो ।